China P5 P6.67 P8 P10 P16 Stadium Perimeter Sport LED Display Scoreboard Manufacturer and Supplier |Yonwaytech
P5 P6.67 P8 P10 P16 Stadium Perimeter Sport LED Display Scoreboard
Stade LED Screensmitana andraikitra bebe kokoa hatrany amin'ny hetsika ara-panatanjahantena.
Stadium LED Displays dia tsara indrindra ho an'ny kalitao avo lenta, fampisehoana mazava tsara amin'ny isa mifandraika amin'ny fanatanjahantena, ny anaran'ny mpilalao na ny mombamomba azy, ny famantaranandro elektronika, ny hafatra an-tsoratra ary ny dokambarotra momba ny raharaham-barotra mandritra ny lalao.
LED scoreboards no fitsipika amin'ny kianja rehetra sy amin'ny fampisehoana.
Tafiditra ao anatin'izany ireo asa fototra ireo, dia tsikelikely izy io no teboka manan-danja hanentanana ny fihetseham-pon'ny mpihaino, hanome ny rivotry ny sehatra, ary hanasongadinana ny fientanentanana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena.
Stade Sports Perimeter LED Display ho an'ny fametrahana anatiny / ivelany raikitra na fampiasana fanofana.
Pixel misy amin'ny 3.33mm / 4mm / 5mm / 6.67mm / 8mm / 10mm azo atao amin'ny vy mahazatra 960mm × 960mm na 1280mm × 960mm.
Ny kabinetra fototry ny kodiarana dia mety ho safidy tsara ho an'ny hetsika aorian'ny hetsika lalao.
Mifandraisa amin'ny YONWAYTECH ho an'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny vahaolana amin'ny fampisehoana ny kianja.
Fepetra ara-barotra:EXW, FOBShenzhen, CIF
Fonosana:Fonosana plywood / raharaha sidina
Fepetra fandoavam-bola:T/T, Western Union
Ora nanomezana:10-20 andro fiasana
Fitaterana:Fandefasana an-dranomasina, Fandefasana an'habakabaka na Express (DHL/FEDEX/EMS)
Toerana niaviany:Shenzhen, Guangdong, PR Sina
MOQ:1 metatra toradroa
Fametrahana haingana sy fikojakojana LED perimeter fampisehoana kabinetra famolavolana.
Fitaovana fiarovana malefaka mba hiarovana ny mpilalao amin'ny loza, azo antoka kokoa mandritra ny hetsika lalao.
Miaro ny fiarovana manokana ny atleta ny famolavolana bika aman'olombelona ary mandray anjara amin'ny famolavolana ny kianja.
Fanerena ratsy Heat-dissipation rafitra, miantoka bebe kokoa ny azo itokisana.
Sata fanaraha-maso lavitra ny LED Display
FAHAZAVANA AVO hatramin'ny 6500nits/sqm miaraka amin'ny horonan-tsary avo lenta famelombelomana tsy misy flicker.
Ny fampisehoana Yonwaytech Perimeter dia manamora ny fanasongadinana ireo mpanohana anao manerana ny trano.
Ovay ireo mandritra ny lalao mba hisarihana ny sain'ny mpihaino anao sy hamoronana fahalianana bebe kokoa amin'ny mpanao dokambarotrao.
Kabinetra manara-penitra tsara tsy misy elanelana miharihary eo amin'ireo kabinetra.
Ny fiasa tsy misy deformability dia mitazona ny efijery amin'ny endrika tsara sy milamina.
Aerofoil fan mangatsiaka avy hatrany, 4 mpankafy voaendrika ao amin'ny kianja tsirairay nitarika kabinetra, ventilation volume dia 5.6 metatra toratelo isa-minitra, rivotra mivezivezy in-20 minitra tena ao anatin'ny nitarika kabinetra.
Fandrefesana avo lenta.
Cabinet safidy A- ny klasika vy lacquered kabinetra mainty:
Ny akora vy vita amin'ny vy miaraka amin'ny fitsaboana hafanana, voarakotra amin'ny sarimihetsika fiarovana tsy misy rano, dia afaka manitatra ny fiainan'ny serivisy, manatsara ny fanoherana ny hafanana.
Ankoatra izany, ny kabinetra dia manana hamafin'ny avo, rivotra tsara ary fanoherana mangatsiaka, mahatohitra ny rivo-doza faha-12.
Ny haben'ny kabinetra fampisehoana LED ivelany dia azo namboarina araka ny haben'ny maody mba hifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa samihafa, toy ny 960mmx960mm, 1280mmx960mm, 1200mmx800mm, 640mmx960mm sns.
Pixel amin'ny 3.33mm / 4mm / 5mm / 6.67mm / 8mm / 10mm amin'ny kabinetra notarihan'ny perimeter namboarina dia ahafahanao manana fangatahana namboarina bebe kokoa ho mora kokoa, toy ny tariby ao anaty kabinetra, sensor maivana naorina.
Ny tsy fahampian'izy ireo dia ny lanjany avy amin'ny kabinetra vy LED Perimeter dia manodidina ny 60kg / m2.
Fa ny kodiaran'ny kianja mitaingina ny kabinetra fampisehoana dia mety ho safidy, izay mety ho mora kokoa rehefa vita ny hetsika lalao hanangonana ny fampisehoana.
Cabinet safidy B- Magnesium alloy maivana lanja nitondra kabinetra:
Die Casting Aluminum maivana lanja Magnesium Alloy ho an'ny fametrahana efijery raikitra sy fanofana.
Ny lanja maivana maivana sy ny kabinetra manify, ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena manezioma dia nitarika kabinetra fampisehoana 960mm × 960mm × 100mm miaraka amin'ny 26kg / cabinet fotsiny.
Ny sisiny dia mihidy haingana ary mora kokoa amin'ny fiasana ny pin.
landihazo avo lenta eo an-tampon'ny kabinetra mba hampihenana ny fiantraikan'ny atleta mandritra ny hetsika.
Saron-tava maodely led polymer malefaka manome fiarovana tsara kokoa amin'ny ratra vokatry ny fifandonana.
Azo ampiasaina be dia be ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany ho an'ny scoreboard raikitra na fanofana kianja manodidina ny fampiasana fampisehoana.
High standard 320mm × 160mm LED Module voaendrika ao amin'ny 960mm × 960mm × 100mm maty fanariana aluminium magnésium firaka kabinetra misy pixel pitch amin'ny p2.5 / p3 / p3.3 / p4 / p5 / p6 / p6.67 / p8 / p10…… ho an'ny fampiasana anatiny na ivelany.
Ny maodely tsy miankina tsy miankina amin'ny rano sy ny fefy tantera-drano miaraka amin'ny famehezana tsara indrindra mba hiarovana ny kabinetra, izay tsy tantera-drano tanteraka, tsy misy rano ary mahatohitra ny harafesina, ary ny tahan'ny fiarovana dia hatramin'ny IP65 ao amin'ny kianja ivelany.
Ny toetr'andro rehetra ho an'ny tontolo ivelany, afaka miasa tsara amin'ny toetry ny andro rehetra,mateza, azo itokisana, Anti-ultraviolet ary tsy miovaova.
Ny zoro fametrahana ny kianja nitarika kabinetra azo ahitsy araka ny toerana tena toe-javatra, ary ny zoro azo flexibly niova.
Izy io dia manohana ny fanitsiana 60 ° / 65 ° / 70 ° / 75 ° / 80 ° / 85 ° / 90 °.
Avo-tanjaka, tensile fitsapana hahatratra 300kg, hery mihoatra noho ny aluminium
Ny zoro fijerena dia hatramin'ny 140° mitsangana ary 120° mitsivalana, manome zoro fijerena midadasika, manome anao ny faritra fijerena efijery lehibe indrindra, baolina maso bebe kokoa.
Ny fifandraisana seamless dia mora kokoa ny miasa, ny fanaparitahana hafanana haingana dia miantoka ny fahombiazany.
Miaraka amin'ny fanesorana ny fonon-ondana sy ny rafitra mijoro eo amin'ny fampisehoana led perimeter, dia azonao atao ny manamboatra ny kabinetra fampirantiana ho an'ny takela-by ivelany.
Raha mametraka ny efijery amin'ny bara mihantona ianao, dia azonao atao koa ny mampiasa ny kabinetran'ny led ho toy ny rindrina horonan-tsarimihetsika miaraka amin'ny fametrahana mihantona.
Izany dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny fametrahana sy fampiharana maro avy amin'ny fampisehoana led Yonwaytech Stadium.
Azonao atao ny miantso azy io ho "Transformer" nitarika fampisehoana avy amin'ny YONWAYTECH Sports LED Display.
Yonwaytech Stadium Perimeter LED Display / Sport LED Scoreboard any Aostralia.
Y-Stadium LED Display Indoor Series–960×960–V01
Pixel Pitch 2.5mm 3,076 mm 4mm 5mm 10mm
LED SMD 3 in 1
Haben'ny Module 320mm x160mm
Famaha ny Module 128×64(teboka) 104×52(teboka) 80×40 (teboka) 64×32(teboka) 32×16(teboka)
hakitroky 160000 pixels/sqm 105688 teboka/sqm 62500 teboka/sqm 40000 pixels/sqm 10000 pixels/sqm
Ny haben'ny kabinetra LED 960x960x87(mm)
Lanja kabinetra <25kg/pc
ara-nofo Die Casting Magnesium Alloy
ny famirapiratry ny mazava 800-1000 cd/m2(Nits)
Avg fanjifana herinaratra ≦450w ≦380w ≦350w ≦320w ≦280w
Fanjifana herinaratra max ≦980w ≦900w ≦880w ≦850w ≦750w
Lavitra fijerena tsara indrindra 2,5m hatramin'ny 25m 3m hatramin'ny 30m 4m ny 40m 5m hatramin'ny 50m 10m hatramin'ny 100m
Gray Level ≧ 14 bit
Viewing Angle Marindrano:≥140˚ / Mitsangana:≧120˚
Frequency vaovao ≥1920Hz / ≧3840Hz Tsy voatery
Hamandoana-miasa 10% ~ 95%
Hery miasa AC100-240V 50-60Hz
Fiainana écran ≥100000 ora
Fomba fanaraha-maso Synch na Async
taratasy fanamarinana CE, RoHs, FCC, UL
Warranty 3 Taona - 5 Taona Tsy voatery
Naoty fiarovana IP43 porofo vovoka
Y-Stadium LED Aseho an-kalamanjana Series–960×960–V01
Pixel Pitch 4mm 5mm 6,67 mm 8mm 10mm
Famaha ny Module 80×40 (teboka) 64×32(teboka) 48×24(teboka) 40×20 (teboka) 32×16(teboka)
hakitroky 62500 teboka/sqm 40000 pixels/sqm 22478 teboka/sqm 15625 teboka/sqm 10000 pixels/sqm
Lanja kabinetra <29kg/pc
ny famirapiratry ny mazava 6000-6500 cd/m2(Nits)
Avg fanjifana herinaratra ≦480w ≦450w ≦350w ≦320w ≦280w
Fanjifana herinaratra max ≦980w ≦950w ≦880w ≦850w ≦750w
Lavitra fijerena tsara indrindra 4m ny 35m 5m ny 45m 6m ny 55m 8m ny 76m 10m ny 98m
Naoty fiarovana IP65 (Eo anoloana) / IP54 (vohoka)
teo aloha: P0.9375, P1.25, P1.56, P1.875 Smartshelf LED Banner Display, Digital Price Tags Screen.
Manaraka: 192mmX192mm Frontal Service P6mm ivelany LED Module fampisehoana
P5 P6.67 P8 P10 P16 kianja perimeter Sport LED...
Dacing Floor LED Display Tile / Interactive LED...
Concert Fiangonana hetsika dingana fanofana LED Display, I...